Sida loo suuq geeyo loona kobciyo Dhacdadaada Xiga khadka tooska ah | Martech Zone
Sida loo suuq geeyo loona kobciyo Dhacdadaada Khadka Tooska ah
Waxaan horey u qornay sida looga faa'iideysto warbaahinta bulshada si ay u suuq geyso dhacdadaada xigta, iyo xitaa waxyaabo gaar ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo Twitter si kor loogu qaado dhacdo. Waxaan xitaa wadaagnay a naqshadeynta suuqgeynta dhacdada.
Tani infographic laga soo qaatay DataHero, si kastaba ha noqotee, waxay bixisaa faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan isticmaalka emaylka, moobiilka, raadinta iyo bulshada si kor loogu qaado loona suuq geeyo dhacdooyinkaaga.
Ka helitaanka dadka inay ka soo qeyb galaan munaasabadaada kaliya maahan sameynta munaasabada lafteeda mid fantastik ah, waa inaad sidoo kale suuq u sameysaa. Faahfaahintan ayaa kugula talinaysa hababka ugu fiican ee loogu talagalay sida loogu suuq geeyo munaasabaddaada internetka, laga bilaabo suuqgeynta emaylka, kor u qaadista bulshada, si loo helo mashiinka raadinta.
Waa kuwan qaar ka mid ah hababka ugu fiican ee la muujiyey ee ku saabsan suuqgeynta munaasabaddaada internetka
Email Marketing - Ka faa'iideyso sawirrada iyo emayllada jawaabta ka bixiya sicirka diiwaangelinta oo kordhay.
Suuq-mobile - Tiro sii kordheysa oo diiwaangelin ah ayaa ku dhacda aaladda mobilada si loo hubiyo in boggaaga diiwaangelinta loogu talagalay in lagu daawado moobiilka.
Dhiciyaan Search Engine - Ku hagaaji boggaaga munaasabadaha ereyada muhiimka ah iyo ka shaqee sidii aad isugu dayi lahayd inaad ka hesho meelaha kale ee khuseeya ugu yaraan 4 toddobaad kahor dhacdadaada si aad isugu daydo inaad si fiican u darajooto.
Media Social Suuq - Abuur hashtag gaar ah kuna dhiirrigeli kaqeybgalka warbaahinta bulshada kahor iyo inta lagu jiro dhacdadaada qaar ka mid ah dib u eegista kadib.
Tags: hababka ugu wanaagsandhacdosuuq-geynta suuqadhacdo suuqgeynta hababka ugu fiicandhacdo suuqgeynta iimaylka hababka ugu fiicandhiirigelinta suuqgeynta dhacdadadhacdo mobiledhacdo suuqgeynta moobiilkadib u eegista dhacdodhacdo injineernimada raadinta dhacdodhacdo seodhacdooyinkasida loogu suuq geeyo munaasabadaada internetkasida kor loogu qaado dhacdo khadka tooska ah ka socotasuuqgeynta munaasabadda internetkadhiirrigelinta munaasabadda internetka
Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato "Waqtiyada Ugu Fiican"